प्रेरक प्रसंग : संघर्ष के हो ? झुसिल्किराबाट सिक्नुहोस् — Motivatenews.Com
प्रेरक प्रसंग : संघर्ष के हो ? झुसिल्किराबाट सिक्नुहोस्
काठमाडौं – उत्कृष्ट खेलाडीहरुले विजयी हुनुभन्दा पहिले अत्यन्तै डरलाग्दो बाधाहरुको सामना गरेको इतिहासले देखाउँछ । उनीहरु हारबाट हत्तोसाहित हुन अस्वीकार गरेकाले विजयी भएका तथ्य हाम्रो माझ छन ।
जीवनमा प्रकृतिले हाम्रो परिक्षा लिन्छ र त्यसका लागि कहिले जितको सुशी पाउँछौं भने कहिले दुःख पाउँछौं । तिनलाई हामी कसरी अंगाल्छौ भन्ने कुरा हामीमा नै भर पर्छ । कोशिस नगरी जित हात पार्न सक्तैनौं ।
एक जीवविज्ञानका शिक्षले विद्यार्थीहरुलाई झुसिल्किरो पुतलीमा परिवर्तन हुने तरिका पढाइरहेका थिए । एउटा प्रयोगशालामा झुसिलकिरा पुतली बनिसकेको थियो । अब २ घण्टाभित्रमा पुतली खोलबाट बाहिर निस्कन छटपटाउँछ । संघर्ष गर्छ । यसैविचमा शिक्षक कसैले यसलाई सहयोग नगर्नु भनेर बाहिर गए । विद्यार्थीहरु बसेर हेरिरहेका थिए । त्यो पुतली पनि बाहिर निक्लन संघर्ष गर्दै थियो ।
त्यसको घटपटी देखेर एउटा विद्यार्थीले खोल च्यातेर त्यो बाहिर निकाल्न सहयोग गर्यो । त्यसपछि पुतलीले बाहिर निक्लिन संघर्ष गर्न परेन । तर केही समय पछि नै पुतली मर्यो ।
शिक्षक फर्किएपछि त्यहाँ भएका सबैकुरा विद्यार्थीलाई उसलाई सुनाए । खोलबाट बाहिर निक्लन संघर्ष गर्दा नै पुतलीका पखेट्टा बृद्धि हुने र दह्रो हुने प्रकृतिको नियम हो भनी शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाए । पुतलीलाई सहयोग गरेर उसको संघर्षलाई बन्चित गरेको हुँदा त्यो पुतलीलाई विद्यार्थीले मार्न बाध्य पार्यो ।
हो यही सिद्धान्त हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ । संघर्ष विना जीवनमा महत्वपूण केही पनि प्राप्त हुँदैंन । हामी अभिभावकहरु धेरै मायाले गर्दा आफ्ना केटा केटीलाई संघर्ष गर्न नदिई उनीहरुलाई घाटा पुर्याउँछौं । यसले बच्चको बृद्धि विकासमा बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ ।